Maamulka Jubbaland oo Farmaajo ugu baaqay inuu Faragaliyo Khilaafka ka taagan…. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMaamulka Jubbaland oo Farmaajo ugu baaqay inuu Faragaliyo Khilaafka ka taagan….
Maamulka Jubbaland oo Farmaajo ugu baaqay inuu Faragaliyo Khilaafka ka taagan….
Maamulka Jubbaland ayaa Madaxweynaha Somaliya waxa ay ugu baaqeen inuu soo farageliyo Khilaafka ka dhashay magacaabista Taliyaha cusub ee Qaybta 43-aad ciidanka Xoogga dalka Somaliya.
Baaqaan ayaa waxaa diray Madaxweyne Ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana uu sheegay Madaxweynaha in looga baahan yahay inuu deg deg u soo farageliyo khilaafka culus ee ka taagan magacaabista Taliyaha qaybta 43-aad ee ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Jubbaland Maxamud Sayid Aadan, ayaa sheegay magacaabista Taliyaha cusub in aan lagala tashan, sidoo kalena xilligaan aan la joogin waqti isbedel la sameeyo, maadaama sida uu sheegay lagu jiro marxalad dagaal.
“Madaxweynaha arrintaan ha soo farageliyo, Wasaaradda Gaashaandhigga arrintaan hasoo farageliso waxa qaldan si loo ogaado oo loo xaliyo, maadaama Qalad uu taagan yahay.” Ayuu yiri Madaxweyne Ku xigeenka Jubbaland.
Maxamuud Sayid Aadan, ayaa sheegay qoraalkii ugu dambeeyay Bishii July ay u direen Madaxweynaha Somaliya, kaasi oo ku aadan hanaanka amniga iyo ciidamada in Madaxweynaha uusan ka soo jawaabin sida uu hadalka u dhigay.
Jubbaland ayaa shalay Magaalada Kismaayo waxa ay dib uga celisay Jeneraal Cali Bogmadow oo Taliska qaybta 43-aad ee Jubbooyinka loo magacaabay, arrinta ugu way nee diidmadana waxa ay ku saleysay wadatashi la’aan.
DAAWO SAWIRO:- Madaxweynaha dalka Eritrea oo gaaray magaalada Adis Ababa